I-GNU Linux-libre 5.7: i-kernel ngaphandle kwama-blobs isivele iphumile | Kusuka kuLinux
I-GNU Linux-libre 5.7: i-kernel ngaphandle kwama-blobs isivele iphumile
Usuyazi vele ukuthi ku-kernel.org ungakhetha ukulanda inguqulo ye-vanilla ye-Linux kernel, enguqulo yayo yakamuva ngesikhathi sokubhala le ndatshana Linux 5.7. Kepha akuyona ukuphela kwenguqulo ekhona yaleli gatsha, ngoba kukhona ne-100% yamahhala ebizwa I-GNU Linux-mahhala 5.7, lapho sisebenze khona ukuqeda wonke ama-blobs kanambambili, lawo ma-module ne-firmware yomthombo ovaliwe efakwe esikhundleni samahhala.
Uma ungomunye wabantu abakhetha ukusebenzisa ikhenela ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lwekhodi yokuphathelene noma abashayeli abavaliwe, lapho-ke uzoyithanda le nguqulo ongayilanda, uyilungiselele futhi uyifake ku-distro yakho. Ngaphezu kwalokho, manje ngale nguqulo entsha engu-5.7 ihambisana nochungechunge olusemthethweni lwe-vanilla kernel, ngakho-ke luzoba nokuthuthuka okuningi nezindaba (inqobo nje uma zingahlali ezindaweni zama-binaries asusiwe).
Le nguqulo ye-GNU Linux-free 5.7 ikhubaze amanye ama-blobs kanambambili njenge-Azoteq IQS62X MFD, IDT 82P33xxx PTP clock, Marvell OcteonTX CPT, Mediatek MT7622 WMAC, MHI bus, Qualcomm IPA, Broadcom FMAC, ARM64 DTS, AMDGPU Pro, m88ds3103 DVB, Mediatek mt8173 VPU kanye neVPUon 7622Dec , I-Qualcomm Venus, i-Realtek Bluetooth, isikrini sokuthinta se-Silead x7663, njll.
Amanye ama-blobs kanambambili aphelelwe yisikhathi afana ne-Intel i915s nawo asusiwe, futhi enza ezinye izinguquko, njengokuhlanza izilawuli ze-i1480 ze-USB, izinguquko zokuzihlola kwe-deblob-check, izinguquko kumagama we-blob, amasethingi we-mscc PHY driver, imibhalo ye-wd719x, njll.
Empeleni, ngaphandle kokubasusa labo bashayeli, akufanele ube nezinkinga ngehadiwe nokwesekwa, njengoba kunabashintshi bamahhala. Noma kunjalo, ukusebenza kungahle kungafani noma kungahle kube nenkinga ehlukile kwezinye izimo ...
Uma unesifiso landa le kernel bese uyihlola ku-distro yakho, ungayilanda kusuka kulokhu Iwebhusayithi esemthethweni. Jabulela inkululeko!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-GNU Linux-libre 5.7: i-kernel ngaphandle kwama-blobs isivele iphumile
Lezi yizici ezintsha ze-Elementary OS
I-SpaceX: thatha osomkhathi baye esikhaleni usebenzisa i-Linux